jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raaw’atameef haqni . – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsjaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raaw’atameef haqni .
jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raaw’atameef haqni akka argamu waan humna isaanii kan godhan tahuu miseensi Kongiresii Ameerkaa aadde Ilhaan Omar ibsan.
Opdo, Odp, Pp, Bilxiginnaan Baqqalee fi Jowwaariifuu hintaane!
Dhugaa yoo dubbanne Opdo/Bilxiginnaan bikka kana geyuuf qoodni Baqqalee fi Jowwaar baay’ee ol’aanaadha, Keessaatuu Jowwaar Mohammed qooda Leencaati qaba garuu hintaane, Inumaatuu waan isaan mudate walumaan argaajirra. Nuti kana beeynaaf lakkisaa jennee waywaataa turre.
Hidhaan qoraasuma dhiiraati.
Hidhaafi Ajjeechaan Karaatii nun deebisu,Qabsoon itta fufa Bilisummaan nidhufa.nagaan oolaa
BB$: Adoolessa 4/2020.
Ajjeechaa art. beekkamaa fi
Aadde Ilhaan Omar kana ibsan fuula Tiwiitera isaanii irratti ergaa dabarsaniini.
Lammii Ameerkaa hidda dhalata Somaaliyaa tan qabduu fi Dimokraatota irraa miseensi kongirasii US Ilhaan Omaar ajjeechaa Hacaaluu irratti raawwateef haqni akka argamu Ameerikaan akka gargaartu waan humni koo dandayu hundaa nan godhaa jette.
Dabalataan biyyoonni biraatis dhimma keessoo Itoophiyaa seenuun jeequmsa fi qoodinsa gara caalu akka hin finneef if eeggadhaa jechuun dhaamtef.
Dabalataan Mootummaan Itiyoophiyaa ammoo intarneetii cufe akka banu gaafatte Ilhaan Omar.
Haawaasni Oromoo biyyoota alaa gara garaa keessatti argamu ajjeechaa art. Haacaaluu Hundeessa fi hidhamuu Obbo Jawar Mohammed,obbo Baqqalee Garbaa akkasuma Oromoota biraa irratti fudhatame baleeleffatuun mormii jabaa geggeessuu itti fife jira.
Hiriira kanaanis dhiibban mootummaa Itiyoophiyaa irratti cimaa jira.